Izvi zvakatiunza May. MY balance of 2021 part 6 | Linux Addicts
Izvi zvakatiunza May. YANGU chiyero che2021 chikamu 6
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Misangano / Zviitiko / Hurukuro
En wongororo yangu Nezve zvakaitika muna 2021, ndinoona kuti mwedzi waChivabvu wakaunza gakava rayo, kurwa pakati pevazvipiri vanogadzira uye muzvinabhizinesi anodzora chirongwa, uye kuratidzwa kwaLinus Torvalds pabasa remakambani.
0.1 Kutenga kweAudacity
0.2 Vaya vakachenjera
0.3 Linus izwi
0.4 Pfura Bitcoin
0.5 Ndokuona iwe usati Freenode
1 Zvinyorwa Zvinoenderana
Gare gare inozova imwe yemakakatanwa egore. Asi, parizvino, nhau pfupi dzakatiudza nezvei mumwe munhu akatenga Audacity, imwe yeanonyanya kufarirwa yakavhurwa sosi edhiyo edhita. Mutengi aive Muse Group, muridzi weMuseScore mimhanzi notation software.
Varidzi vatsva vakavimbisa kuhaya vamwe vanogadzira nyanzvi nevagadziri.
Sechikamu chepurojekiti yekutsvagisa, nhengo mbiri dzeYunivhesiti yeMinnesota dzanga dzichibata nemaune nyaya dzekuchengetedza muLinux kernel.. Dambudziko nderekuti kana Linus Torvalds kana chero munhu kuLinux Foundation aiziva nezvazvo.
Mhinduro yacho yakakurumidza uye yakabva kuna Greg Kroah-Hartman, mugadziri webasa rekuchengetedza Linux kernel yebazi rakagadzikana, avo vakaita nekurambidza kwete ivo chete, asi chero mugadziri akabatana neyunivhesiti, kubva pakuwedzera kupa.
Maererano nekuongororwa kwekomiti yevanopa mazano, kubva pahuwandu hwe435 mipiro yakaitwa nenhengo dzeyunivhesiti, ruzhinji rwakanga rwakanaka. 39 yakanga ine zvikanganiso uye yaida kugadziriswa; 25 dzakanga dzatoruramiswa, 12 dzakanga dzatove dzechinyakare; 9 yakanga yaitwa boka retsvakurudzo risati ravapo uye imwe yakabviswa pakukumbira kwemunyori wayo.
Nekumanikidzwa kubva munharaunda, vaongorori vaifanira kukumbira ruregerero:
Chekutanga, takakanganisa nekusadyidzana nenharaunda yeLinux kernel tisati taita chidzidzo chedu. Isu tave kunzwisisa kuti zvainge zvisina kufanira uye zvichirwadzisa nharaunda kuti ive nyaya yekuferefetwa kwedu uye kutambisa kuedza kwavo kuongorora zvigamba izvi pasina ruzivo rwavo kana mvumo…
Chechipiri, tichitarisa kukanganisa kwemaitiro edu, hatidi kuti basa iri rimire semuenzaniso wekuti tsvakiridzo ingaitwe sei munharaunda ino. Asi, tinovimba kuti chikamu chino chichava nguva yekudzidza kunharaunda yedu, uye kuti nhaurirano inozobuda uye kurudziro inogona kushanda segwara rekutsvaga kwakafanira kweramangwana.
Muna Chivabvu, Linus Torvalds akapa chirevo cheemail uye aive netsanangudzo dzinonakidza.
Pamusoro pebasa remakambani makuru mukusimudzira Linux, akati:
Uye mazhinji emakambani makuru etekinoroji anoshandisa kernel anozopedzisira ave kubatanidzwa mukuita kwekusimudzira. Dzimwe nguva vanopedzisira vaita basa rakawanda remukati uye ivo havana kunyatsogona kudzosera zvinhu kumashure (ini handisi kuzotaura mazita, uye vamwe vavo vari kuyedza kuita zvirinani), asi zvinokurudzira kwazvo kuona makuru. makambani anobatanidzwa.
Imwe yedzinodzikira iyo yakakurumbira yekristptocurrencies yakatora gore rapfuura yakakonzerwa nekuwedzera kwekuedza kwevatongi veChinese kuputsa kushandiswa kwekristptocurrencies nemasangano emari.
Mabhengi neinternet indasitiri masangano akataura mune yakabatana chirevo kuti kubhadhara uye masangano emari haafanire kugamuchira cryptocurrencies sekubhadhara kana kupa masevhisi uye zvigadzirwa zvine chekuita nazvo. Chirevo ichi chakaburitswa pane mumwe kunze kweWeChat account yePeople's Bank of China.
Muchinyorwa, kunze kwekukodzera ichangoburwa kuwedzera ukoshi se "fungidziro", vakataura kuti cryptocurrencies haisi "mari chaiyo" uye haifanirwe kushandiswa zvakadaro mumusika.
Asi, maererano nemakuhwa, China inoda kusimudzira mari yayo yedhijitari, kunze kwekunetsekana nekushaikwa kwekutonga paBitcoin uye mukana wekuti vashandisi vayo vanyorwe.
Ndokuona iwe usati Freenode
Zvingave zvinopokana kune vanogadzira yakavhurika sosi purojekiti kutaurirana kuburikidza neWhatsApp, saka kuwanda kwebasa kunorongwa kuburikidza neIRC. Kusvika pakutanga kwegore rapfuura, chishandiso chikuru chekutaurirana yaive Freenode. Nekudaro, nekuda kwekukakavadzana pakati pevanozvipira vanobatana nekambani ine muridzi wepurojekiti, wekutanga akagadzira chirongwa chitsva chinonzi LiberaCh.uko nharaunda dzinozivikanwa dzakavhurika dzakatamira.
MUSE Boka Inowana Audio Edhiyo Audacity
China ichipesana neBitcoin. Iyo bubble inopera here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Izvi zvakatiunza May. YANGU chiyero che2021 chikamu 6
KDE Plasma 5.24 Beta yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Iyo Yakakura Penguin Heist: mutambo wevhidhiyo usina kunyanya kushamisa